Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Fampandrosoana fizahan-tany maharitra amin'ny fomba fijery Aziatika atsimo
An eturbonews mpandray anjara avy any Sri Lanka, dia nanao seminera momba ny fampandrosoana maharitra momba ny fizahan-tany avy amin'ny Perspective South-Asian.
Srilal Miththapala, mahazatra eturbonews mpandray anjara avy any Sri Lanka, dia nanao seminera fohy tao amin'ny Monash University, Caulfield campus any Melbourne, momba ny "Fampandrosoana maharitra fizahan-tany avy amin'ny fomba fijery aziatika atsimo - fandalinana tranga any Sri Lanka." Ny seminera dia natolotry ny Programan'ny fizahantany nahazo diplaoma, Sekolin'ny Fiteny, Haisoratra, Kolontsaina ary Fiteny ary ny Faculty of Arts, Monash University & Monash Asia Institute.
Srilal dia nanome fampidirana sy topy maso momba ny fizahantany any amin'ny faritra atsimo-atsimo, izay manasongadina ireo paikady samihafa ampiasain'ny firenena ao amin'ny faritra mba hampiroboroboana ny fizahantany.
Avy eo izy dia nanoritsoritra ny fisondrotan'ny fizahan-tany taorian'ny ady tany Sri Lanka sy ny fifantohana amin'ny famokarana vokatra maharitra sy serivisy izay misy ankehitriny. Nahazo ny traikefany tamin'ny naha-talen'ny Tetikasa tao amin'ny efitrano fivarotana Ceylon izay tena nahomby, SWITCH ASIA, Greening Sri Lanka Hotels, notohanan'ny EU, ary ny asa izay ataony hatrany amin'ny fampandrosoana fizahan-tany maharitra any Sri Lanka.
Ny mpijery mankasitraka dia misy mpampianatra sy mpianatra avy amin'ny sehatra samihafa amin'ny sehatry ny fianarana ary nifarana tamin'ny alàlan'ny Q & A ny programa.
Nandritra ny taona maro, Srilal dia mpiady mahery teo amin'ny fampiharana ny Sustainable Consump Practices (SCP) ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Sri Lankan, ary mbola tafiditra amin'ny consultancy sy ny fiofanana izy, ary koa amin'ny famoronana fahatsiarovan-tena amin'ny faharetana amin'ny fizahantany.